Wasiirka Arr. Dibadda Oo Jawaab Ka bixiyay Eedo uu u soo jeediyay Agaasimihiisii oo is casilay | FooreNews
Home wararka Wasiirka Arr. Dibadda Oo Jawaab Ka bixiyay Eedo uu u soo jeediyay Agaasimihiisii oo is casilay
Wasiirka Arr. Dibadda Oo Jawaab Ka bixiyay Eedo uu u soo jeediyay Agaasimihiisii oo is casilay
Hargeysa (Foore)- Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland Md. Maxamed Cabdilaahi Cumar, ayaa jawaab kulul ka bixiyay eedo uu maanta u jeediyay Agaasimihii Guud ee wasaaraddaasi Maxamuud Raage Ibraahim, oo ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu wasaaradaasi ka hayay.
Wasiirku wuxuu ku tilmaamay Agaasimaha Guud inay shaqada wasaaradaasi ku adkayd isla markaana uu ka soo bixi waayay waajibaadkiisii shaqo.
Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar wuxuu sidaasi ku sheegay waraysi uu galabta siiyay shabakada wararka ee Somaliland.Org, waxaanu yidhi “Agaasimaha Guud Maxamuud Raage, runtii mudadii yarayd ee koobnayd ee aanu wada shaqaynaynay shaqada Wasaaraddu way ku adkayd dhibaato xoog lihina way ka haysatay oo wuu ku haftay. Wasaaradda Arrimaha dibadduna waa wasaarad balaadhan oo la shaqaysa beesha caalamka, Ha’yadaha qarammadda Midoobay iyo Urur-goboleedyadaba. Markaa qofka Agaasimaha Guud noqonaya waxa laga doonayaa karti iyo aqoon.”
“Agaasimaha markii aanu aragnay inay ku adag tahay hawsha wasaaraddu gaar ahaan xidhiidhada iyo luuqaduba, waxaanu garanay inaanu caawino oo waanu taageeraynay, mana jirin wax dhibaato ah oo aanu ku haynay laakiin markii shaqadii ku adkaatay ee ay ka hor timid waa kan maanta iska casilay xilkii, waxaan u rajaynayaa waa nin dhalinyaro ahe’e inuu mustaqbalkiisa ku guulaysto oo uu shaqo kale oo uu ka soo bixi karo qabto,”ayuu yidhi Wasiirka Arrimaha Dibaddu.
Wasiirka waxa kale oo uu sheegay in Agaasimaha Guud ahaa masuulkii hawshiisa ay ahayd isku dubo-ridka hawlaha wasaaradda hase yeeshee aanu Agaasimihiisu aqoon u lahayn shaqada uu hayay.
Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar oo aanu weydiinay su’aal ahayd waxa ka jira inuu leeyahay urur siyaasadeedka NASIYE oo Agaasimuhu ku eedeeyay, waxa uu ku jawaabay “Anigu waxaan ka tirsanaa madaxdii xisbiga Talladda haya ee KULMIYE oo aan ka mid ahaa dadkii ka shaqeeyay inuu xisbigu ku guulaysto madaxtinimada dalka, walina waxaan ka tirsan nahay xisbiga muxaafidka ah ee KULMIYE. Mana jirto wax urur ah oo kale oo aan ku jiro ama samaystay.”
Wasiirku waxa kale oo uu ka jawaabay eed la xidhiidhay in xafiisyadii dalalka dibada ay Somaliland ku lahayd ay xidhmeen, waxaanu yidhi “Xukuumaddu dalka ay ka furanayso xafiis iyo halka aanay ka furanayn waa siyaasad xukuumadeed way jiraan xafiisyadii Somaliland, kuwo kale oo aan loo baahnayna waanu baabiinay. waxaanu qaadanay meelaha aan looga baahnayn wakiil ama xafiis aanu xidhno.”
Wasiirku waxa kale oo uu beeniyay eedo musuq maasuq oo agaasimaha is-casilay u soo jeediyay, waxaanu arrintaasi ku sifeeyay been abuur uu ku sababaynayo fashilaada ka soo wajahday shaqadiisa.
Dhinaca kale, warar xog ogaal ah oo aanu ka helay ilo looga qaateen ah, ayaa shabakada wararka ee Somaliland.Org u xaqiijiyay in xilka qaadista Agaasimaha guud ee wasaaradda Arrimaha dibadda Maxamuud Raagge ay diyaar ahayd isla markaana uu goostay inuu ka hor-dhaco wareegtada shaqada lagaga eryayo.
Previous PostMadaxweyne Ku xigeenka oo xidhay shir goboleedka Haweenka Geeska oo ka socday Hargeysa Next Post“Wakhtigani ma aha kii la is-casili lahaa,Anigana igama suurtowdo…”